Phezulu kwe-10 kufuneka ube ne-iPhone Photo Apps | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 17, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Andinguye umfoti obalaseleyo kwaye ukusebenzisa ikhamera yobungcali kuphezu kwentloko yam, ke ndiyakopela kancinci ngokusebenzisa i-iPhone yam kunye nezinye izinto endizithandayo. Ukusuka kwinkalo yentengiso, ukubonelela ngomfanekiso ngokuthe ngqo emsebenzini esiwenzayo, iindawo esizindwendwelayo, kwaye ubomi esiphila kubo bongeza inqanaba lokucaca ukuba abathengi bethu kunye nabalandeli bayabunandipha.
Ukuzibandakanya noluntu lwethu, iifoto bezingundoqo. Ndingayikhuthaza yonke inkampani ukuba yabele abasebenzi bayo! Nalu ulwahlulo lwezinto endizithandayo ze-iPhone.
Ewe ndiyazi ukuba ikhamera iza ne-iOS kodwa ukhetho lokuthatha umfanekiso we-panoramic luyamangalisa. Ukuthatha ifoto ebanzi, cofa iqhosha lokukhetha xa ikhamera ivulekile. Lo ngumfanekiso endiwuthathe kwikonsathi endiye kuyo kutshanje.
Akukho sinye iifoto zesicelo esenza ukuba kube lula kakhulu ukuba sabelane ngemifanekiso ekuhlaleni. Ndiyathanda ukuba ndingatyhala ifoto ngqo kwi-Twitter, Facebook nakwi-Foursquare ngqo kwi-Instagram kunokuzingela kunye nokufumana iifoto kunye nezinye ii -apps. Ukwakhiwa kwesakhono sokufaka iifilitha kunye neeblur kunokukwenza ubonakale ngathi ungumpro!
Kukho izinto ezithile ezingasokuvumeli ikhamera esisiseko ukuba inomdla, njengokongeza isibali-xesha kunye nokuthatha ifoto. Ikhamera + inezixhobo ezintle zokukunceda ukuba ucofe, ujolise kwaye ungeze ukucaca kwiifoto ozithathayo, kunye nokukwazi ukuzilungisa. Isixhobo sethuluzi esakhelwe amateur!
Iilensi zeGridi zikuvumela ukuba uthathe ingqokelela yeefoto kwaye uzidibanise kumfanekiso omnye. Unokukhetha kwaye wenze ngokwezifiso ubeko, emva koko uthathe ifoto nganye ngokunqakraza kuloo ndawo, emva koko ugcine, wabelane okanye uthumele nge-imeyile imveliso egqityiweyo. Oku kwenza ukuba kwabelwane ngengqokelela encinci ilula kwaye ilula!
UmbalaSplash ukuvumela ukuba ususe umbala kumacandelo efoto oyithathileyo. Uhlelo lokusebenza kulula ngokulula ukuyisebenzisa-yandisa nje ifoto kwaye urhuqe umnwe wakho apho ufuna ukusula khona umbala. Umfanekiso ogqityiweyo unokubonakala umangalisa ngokwenene - le yenye yonyana wam nentombi yakhe edanisayo.
Ngaba wakhe wanayo ifoto ecela i-caption? Yiloo nto uOver ayenzela yona… ukubonelela ngevili lokuhambisa elipholileyo elikuvumela ukuba ukongeze isihloko esimnandi kwifoto yakho kwimizuzu.
I-Snapseed ibonelela ngezihluzo ezinomdla kunye nezixhobo zokuhlela eziqhelekileyo kumfanekiso wakho. Ulawulo olunomda luyamangalisa kwaye ukusebenziseka kuyinto entle.
IBlender yenza le nto ithethayo… ivumela ukubanakho ukudibanisa imifanekiso emininzi kunye. Nanku umdibaniso waseChicago… uqhuba ungena esixekweni ujonge phantsi.
Iyacetyiswa ngu Nat Finn, Khange ndiqonde nokuba i-Aviary inezicelo ze-iOS. Isimanga kukuba ndonwabela usetyenziso lwe-iPhone ngokungcono kunohlobo lwewebhu! I-Aviary inetoni yeempawu, kodwa ikwanayo izitifiketi enokusetyenziselwa ukongeza ii-callout (okanye iindevu) kumfanekiso wakho.
I-Photoshop Express ye-iPhone
Enye ingcebiso evela kuNat kwaye enye bekufanele ukuba ndiyibandakanyile… Photoshop Express. Ukuhlelwa kobuchule onokukufikelela nge-Photoshop Express kunokufumaneka kwezinye izixhobo ezingasentla, kodwa ukusebenziseka lula kuyamangalisa. Yongeza iifilitha, izakhelo kunye neziphumo zento ethe kratya kwaye une-suite enkulu yokuhlelwa kweefoto.
Ngaba unazo naziphi na ezinye ii -apps ze-iPhone ezisebenzisa kakuhle?
tags: blenderikhamera +imibalailensi yegridiumfanekisoimifanekisoiphonephezuiifotopictureyahlutha
Nov 17, 2012 ngo-1:56 PM
Inqwelomoya. Konke malunga umenzi meme. Kwaye inomfiliba kunye nezixhobo zokuchukumisa kwakhona kodwa eyona nto ipholileyo ngayo kukuba inomanyano. Facebook, twitter, flicker...ngexesha elinye. Phantse ipholile njenge-Instagram
Ngoku, eyokuqala kwabo bandivumele ukuba ndidibanise kuFacebook amaphepha entengiso kagoogle kunye neWINS!
Nov 17, 2012 ngo-2:09 PM
Sweet! Andizange ndiqonde ukuba bane-app yeselula!
Nov 18, 2012 ngo-3:10 AM
ewe. ilungile kakhulu. I-app ehlawulwayo, kodwa kumenzi we-meme kunye nokufakwa okubhaliweyo kwakuxabisa kakhulu. Kwakhona iPhotoshop Express kunye ne-InstaPicFrame bezilungile. I-Aviary yayinokwabelana okuhle kakhulu.
Dec 29, 2012 ngo-10:40 PM
Jonga i-app yethu entsha ye-iPhoneography, i-Hipsta Hipster Cam kwi http://www.hipster-camera.com Sicinga ukuba sine-twist epholileyo kwi-app ye-iphone yokufota ye-iphone ngokuba nezihluzo zantlandlolo ezingenasiphelo ezenziwe ngokukhawuleza.
Mar 11, 2013 ngo 1:16 PM
Ndicinga ukuba umbhali ulibale ukubandakanya 'Ikhamera yeZitrr'. Ndicinga ukuba ingcono kakhulu kunekhamera + okanye i-Instagram… kwakhona, ezinye zeapps apha azilunganga:
Epreli 4, 2013 ngo-2: 49 AM
Iiapps ezimnandi! Kodwa kuya kufuneka ujonge i-Auto Colorize Pro
Jan 2, 2014 kwi-3: 05 AM
UFakelo oluPhezulu lweeFoto zokuHlela iiFoto ze-iPad !!! I-Instafusion yeyona nto ilungileyo yokuHlela iiFoto kunye neeNkqubo ezoyikekayo zokuHlela iiFoto kwi-iPhone !!!
endiyithandayo yi-instafusion app
Epreli 6, 2015 ngo-8: 50 PM
Ngaba uyibonile iPix eSweet okwangoku! Umbono opholileyo ngokwenene.